नयाँ आईफोन डी, रक्सीको लागि स्मार्टफोन [हास्य] | आईफोन समाचार
नयाँ आईफोन डी, रक्सीको लागि स्मार्टफोन [हास्य]
जब हामी मात्तिन्छन्, हामी "सानो" नियन्त्रण गुमाउने प्रवृत्ति हुन्छ। पहिलो र सब भन्दा साधारण चीज यो हो कि हामी सीपहरू हराउँछौं, वा यसको सट्टामा, हामी अधिक बेइज्जती हुन्छौं। थप रूपमा, नशाले हामी केहि चीजहरू गर्न सक्दछौं जुन हामी केही घण्टा पछि पश्चाताप गर्नेछौं। तर अब आईफोन डी, जान चाहने व्यक्तिको लागि नयाँ आईफोन मादक र उही एकै ठाउँमा सुरक्षित समयले केहि पनि गर्दैन जसले उसलाई वा उसको स्मार्टफोनलाई हानी गर्न सक्छ।
तपाईंले पहिल्यै याद गर्नुभएकै जस्तो, यो एक हास्यपूर्ण भिडियो हो। द्वारा बनाईएको औसत भन्दा माथिe, भिडियोमा हामी हामीले पिउने अवस्था सामना गर्ने धेरै परिस्थितिहरू देख्न सक्छौं र त्योभन्दा पनि नराम्रो पनि हामी आफैंसँग एक उच्च-यन्त्र लिएर आएका छौं। यस विज्ञापनमा आईफोन डी हास्य, कसको D उनी पियक्कडको लागि आउँछन् (अंग्रेजीमा मातिएका वा मातिएका), यो भुइँमा खस्दा यसलाई भत्काउनबाट रोक्नको लागि यो सुपर प्रतिरोधी छ। थप रूपमा, यो ती क्षणहरूको लागि सबमर्सिबल छ जब हामी यसमा केही तरल फ्याँक्छौं, तर अझै अझै छ।
आईफोन डी एक पट्टा संग आउँछ जुन फोनलाई हाम्रो कलाईमा टाई दिन्छ। यो हराउन उत्तम छैन। कसले एक रात बाहिर केहि पनि गुमाएको छैन? तर अझ चाखलाग्दो कुरा के छ: यसले हामीलाई एक्जलाई बोलाउनबाट रोक्छ। ठीक छ! XD
आईफोन डीमा, सिरी धेरै चलाख छ। हामी के गर्न चाहन्छौं सो गर्न हामीले चाहेको कुरा बुझ्नै नसकिने हुन सक्छ ... यदि हामीले केही पनि बुझ्दैनौं भने पनि। र यसले हामीलाई चेतावनी दिन्छ कि यदि हामी केही केसहरूमा पार गर्दै छौं, जस्तो कि हामी एक अभिभावक हौं र हामी धेरै ढिलो घर पुग्ने छौं।
यो स्पष्ट छ कि भिडियोले हामीलाई हाँस्नको लागि हो, तर यदि यो सफल भयो भने यो यो हो किनभने हामीले केही परिस्थितिहरूको अनुभव गरेका छौं यसले हामीलाई देखाउँदछ। निश्चित रूपमा एक भन्दा बढीले एक रातमा एक आईफोन डी मनपर्दछ, सही?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » नयाँ आईफोन डी, रक्सीको लागि स्मार्टफोन [हास्य]
अनौंठो हुन्छ। कसरी क्रिस्टिनाले यो बुलशिट राख्दैन?
हेडलाईनले यसलाई एकदम स्पष्टसँग भन्यो, [हास्य], Toño। आराम गर्नुहोस्, जीवनको आनन्द लिनुहोस्, आफ्नो गधाबाट स्टिक निकाल्नुहोस्।
यो पनि यी चीजहरूको लागि आफ्नो चीज छ
जेलब्रेक पुरस्कार २०१ 2015 परिणामहरू
एप्पल जनवरी मा चीन मा चार एप्पल स्टोरहरु खोल्ने